ရုပ်အလောင်း မရှိတော့တဲ့ ကနောင်မင်းသားကြီးရဲ့ အုတ်ဂူ - Thutazone
ရုပ်အလောင်း မရှိတော့တဲ့ ကနောင်မင်းသားကြီးရဲ့ အုတ်ဂူ
အိမ်ရှေ့စံကနောင်မင်းရဲ့ အရုပ်လောင်းကို ဘယ်နေရာမှာ မြုပ်နှံထားခဲ့သလဲလို့ မေးရင် မန္တလေးအရှေ့ပြင်က သူကျဆုံးခဲ့တဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ စန္ဒမုနိစေတီတော်ကြီးမှာ မြှုပ်နှံထားခဲ့တယ်လို့ လူတိုင်းက ပြန်ဖြေကြပါလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ အရင်တုန်းက အိမ်ရှေ့စံကနောင်မင်းရဲ့ အရုပ်လောင်းကို အဲဒီစေတီနဲ့ စန္ဒမုနိရုပ်ပွားတော် သီတင်းသုံးရာ ဂန္ဓကုဋိ အကြားက အုတ်ပြသာဒ်အတွင်း ဂူသွင်းမြှုပ်နှံထားခဲ့တာပါ ။
အခုချိန်မှာတော့ အဲဒီနေရာမှာ အုတ်ဂူကမ္ဗည်း ကျောက်စာချပ်ကြီးတစ်ခုသာ တွေ့ရပြီး အထဲမှာ အိမ်ရှေ့မင်းရဲ့အရုပ်လောင်း မရှိတော့ဘူး ၊ အုတ်ဂူကလည်း ဟောင်းလောင်းပေါက်ကြီး ဖြစ်နေပြီလို့ ပြောရင် …. ဘာဖြစ်လို့ မရှိရတာလဲ …. ၊ ဘယ်သူက တူးယူသွားတာလဲ ….. ၊
အခု ဘယ်နားရောက်နေသလဲ …. စသည်ဖြင့် သိလိုကြလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ် ။
အဲဒီလိုဖြစ်ရတာဟာ အရင်က မန္တလေးတောင်မှာ ရှိနေတဲ့ ရသေ့ကြီး ဦးခန္တီကြောင့်ပဲလို့ ပြောရမှာပါပဲ။ ၁၈၈၇ ခုနှစ် သီပေါမင်း ပါတော်မူပြီးနောက်ပိုင်း အိန္ဒိယကို နယ်နှင်ခံလိုက်ရတဲ့ အိမ်ရှေ့စံကနောင်မင်းရဲ့ သားတော် လင်းပင်မင်းသားနဲ့ မိသားစုဟာ ၁၉၁၂ ခုနှစ်မှာ မြန်မာပြည်ကို ပြန်လာခွင့်ရခဲ့ပါတယ် ။ ပြန်လာတဲ့ အချိန်မှာ မင်းသားကြီးဟာ အသက် ၅၄ နှစ် ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကျန်နေသေးတဲ့ အိမ်ရှေ့စံ အနွယ်တော်များကလည်း ပြည်တော်ပြန်လာတဲ့ လင်းပင်မင်းသားကြီးကို မန္တလေးမှာ လာနေဖို့ ဖိတ်ခေါ်တာနဲ့ မင်းသားကြီးလည်း သွားနေဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။
မန္တလေးကို ရောက်လာတဲ့ မင်းသားကြီးဟာ အသက်ရွယ်အားဖြင့်လည်း ဇရာပိုင်းကို ရောက်လာတာမို့ ဘာသာရေးဘက်ကို ကိုင်းရှိုင်းလာပြီး သမထ လမ်းစဉ်တွေကိုပါ လိုက်စားလို့ ဖိုထိုးတာတွေလည်း လုပ်လာခဲ့တယ် ဆိုပါတယ် ။ အဲဒီအချိန်တွေမှာပဲ လင်းပင်မင်းသားကြီးဟာ မန္တလေးတောင်က ရသေ့ကြီး ဦးခနီ ္တနဲ့ ပေါင်းဖက်မိသွားတော့တာပါ ။ မင်းသားကြီးက ရသေ့ကြီးကို အိမ်ရှေ့မင်း ထန်းတောကြီး လှူ ခဲ့သလိုမျိုး ဦးခနီ ္တကလည်း ရှိရှိသမျှ အဋ္ဌကထာ ၊ ဋီကာများကို ကျောက်ထက် အက္ခရာတင်ပြီး စန္ဒာမုနိစေတီအတွင်းမှာ စိုက်ထူပူဇော်ခဲ့ပါတယ် ။ ဒါတွေကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် လင်းပင်မင်းသားကြီးနဲ့ ရသေ့ကြီးဦးခန္တီတို့ဟာ အတော်လေးကို ရင်းနှီး အကျွမ်းတဝင် ရှိလှတယ်လို့ ဆိုရပါမယ် ။
သက္ကရာဇ် ၁၂၂၈ ခုနှစ် မြင်းကွန်း မြင်းခုံတိုင် အရေးအခင်းမှာ လုပ်ကြံခံရတဲ့ အိမ်ရှေ့ကိုယ်တော် ကနောင်မင်းသား နဲ့အတူ မလွန်မင်းသား ၊ စကုမင်းသား ၊ ပြင်စည်မင်းသားတို့ရဲ့ အလောင်းတို့ကို မင်းတုန်းမင်းကြီးက စန္ဒာမုနိစေတီတော်အနီးမှာ ဂူသွင်းပြီး မြှုပ်နှံထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ နောက်ပိုင်းကျတော့ အဲဒီ အုတ်ဂူတွေနဲ့ တစ်ဆက်တည်း စေတီတစ်ဆူ တည်ပြီး အမရပူရက ပင့်ဆောင်လာတဲ့ စန္ဒာမုနိရုပ်ပွားတော် ကိန်းဝပ်ဖို့ ဂန္ဓကုဋိတိုက်ကိုပါ တည်ဆောက်ခဲ့တာပါ ။
ဒါကြောင့်မို့ အခုလက်ရှိ ကနောင်မင်း အုတ်ဂူ ကမ္ဗည်းကျောက်ပြားနေရာမှာ ရှိခဲ့ဖူးတဲ့ အိမ်ရှေ့မင်း အုတ်ပြသာဒ်ငယ်ဟာ ဘုရား ဂန္ဓကုဋိတိုက်နဲ့ စေတီအကြား ကျရောက်နေခဲ့ပါတယ် ။ ဒီတော့ ဘုရား ဂန္ဓကုဋိတိုက် ခေါင်မိုး ရေတံလျှောက်က ကျတဲ့ရေတွေဟာ အိမ်ရှေ့မင်းရဲ့ အုတ်ဂူပေါ် ကျနေခဲ့တော့တာပါ ။ အိမ်ရှေ့မင်းအုတ်ဂူပေါ် အဲဒီလိုမျိုး တံစက်မြိတ်က ရေကျနေတာဟာ နာမ်နှိမ်ထားသလို ဖြစ်နေတာကြောင့် အိမ်ရှေ့မင်းရဲ့ အနွယ်တော်များဟာ မကြီးပွားနိုင် ၊ မထွန်းကားနိုင် ဆိုပြီး ရသေ့ကြီး ဦးခန္တီက လင်းပင်မင်းသားကြီးကို ပြောပြသတဲ့ ။
ရသေ့ကြီး ဦးခန္တီရဲ့ စကားကြောင့် လင်းပင်မင်းသားကြီးဟာ သက္ကရာဇ် ၁၂၇၅ ခုနှစ် တန်ခူးလဆန်း ၅ ရက် ညသန်းခေါင်အချျိန်မှာ ဦးခင်မောင်ဒွေးကို အဖော်ခေါ်ပြီး ပန်းရန်သမားနှစ်ယောက်နဲ့အတူ စန္ဒာမုနိဘုရားအတွင်းက ကနောင်မင်းရဲ့အုတ်ဂူကို ဖောက်ပါတော့တယ် ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက် ကျန်အနွယ်တော်များကို လုံးဝအသိမပေးဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ဂူဖောက်ပြီး အိမ်ရှေ့ မင်းရဲ့အလောင်းတော်ကို တွေ့တော့ မင်းသားကြီးက ကတ္တီပါအိပ်ထဲ ထည့်ယူပြီး အုတ်ဂူကို မူလ လက်ရာမပျက်စေပဲ ပြန်ပိတ်စေခဲ့တယ် ။
ဒါပေမယ့် လင်းပင်မင်းသားကြီး ထည့်ယူလာတဲ့အရိုးတွေကို ဘယ်နားမှာထပ်ပြီး သဂြိုလ်ခဲ့သလဲ ဆိုတာကိုတော့ ဘယ်သူမှ တိတိကျကျ မသိကြရဘူးတဲ့ ။ အနွယ်တော်များ ပြောစကားအရ မင်းသားကြီးဟာ အိမ်ရှေ့မင်းရဲ့ အလောင်းကို ဘိသိက်မြှောက်ပြီး ရတနာပန်းတောင်းနဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ထဲကိုချ ခဲ့တယ်လို့ ပြောသလို ရန်ကုန်မြို့လှိုင်မြစ်ထဲကို ချခဲ့တယ်လို့လည်း ဆိုပြန်သတဲ့ ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သေချာတာကတော့ အိမ်ရှေ့မင်းရဲ့ ရုပ်အလောင်းကို ရေထဲချ ခဲ့တယ် ဆိုတာပါပဲ ။
ဒီကိစ္စကို ပိပိရိရိ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမယ့်လည်း ပိုက်ဆံပေးပြီးခိုင်းတဲ့ ပန်းရန်သမား နှစ်ယောက် နှတ်မလုံမှုကြောင့် ဂူဖေါက်တဲ့ကိစ္စကို အင်္ဂလိပ်အစိုးရ သိသွားခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။ တကယ်တော့ လင်းပင်မင်းသားကြီးဟာ ရသေ့ကြီး ဦးခန္တီရဲ့ အယူဆစကားအရ အိမ်ရှေ့မင်း အဆက်တစ်ခုလုံး ကောင်းစားဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး လုပ်ဆောင်ခဲ့တာသာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့်လည်း အုတ်ဂူဖောက်ဖို့ လုံးဝအသိပေးမခံရတဲ့ ကျန်အိမ်ရှေ့ အနွယ်တော်တစ်စုက မကျေမနပ်နဲ့ အင်္ဂလိပ်အစိုးရထံ တိုင်ကြားခဲ့ကြောင်း ၂၂.၅.၁၉၁၃ နေ့ထုတ် မန္တလေးတိုင်း သတင်းစာမှာ ပါလာပါတော့တယ် ။
မန္တလေး အရေးပိုင်ကလည်း မင်းသားကြီးကို ခေါ်ပြီး …
” ခင်ဗျားတို့ ဘာလုပ်ကြတာလဲ ၊ အင်္ဂလိပ် အစိုးရပြုတ်အောင် ဆေးဝါးစီရင်ဖို့ လုပ်တာလား” ဆိုပြီး ကြိမ်းမောင်းပြောဆိုသတဲ့။ အဲဒီမှာ မင်းသားကြီးနဲ့ အတူလိုက်ပါလာတဲ့ ဦးခင်မောင်ဒွေးက…
“သူ့အဖေ အလောင်းကို သူ့သားက ပြန်ဖော်တာ ဘာတတနိုင်မှာလဲ”
…. လို့ ခပ်ပြတ်ပြတ်ပြောပစ်ခဲ့ပြီး ပြန်လာခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။ ဒီကိစ္စက အဲဒီမှာတင် ပြီးမသွားပါဘူး ။ အိမ်ရှေ့မင်းအလောင်း တူးဖော်မှုကို အစိုးရက ပြဿ နာ အမျိုးမျိုးရှာပြီး ပြည်တော်ပြန်ခွင့်ရထားတဲ့ လင်းပင်မင်းသားကြီးကို ၁၉၁၅ ခုနှစ်မှာ ဒုတိယအကြိမ် ပြည်နှင်ဒဏ်အဖြစ် အိန္ဒိယကို ပြန်ပို့လိုက်တော့တာပါ ။
လင်းပင်မင်းသားကြီးဟာ နောက်ထပ် အိန္ဒိယမှာ ၆ နှစ် ထပ်မံနေထိုင်ခဲ့ရပြီး ၁၉၂၁ ခုနှစ် မှာမှ ရန်ကုန်မြို့မှာ ကောင်းမွန်စွာ နေထိုင်ပါမည့်အကြောင်း ကတိကဝတ်တွေပြု ပြီးမှ ပြန်လာခွင့်ရခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် မန္တလေးကိုတော့ သွားရောက်ခွင့် ပိတ်ပင်ခံခဲ့ရပါတယ်။
အခုရေးပြခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေက ဆရာမောင်သန်းဆွေ ( ထားဝယ် ) ရဲ့ ကုန်းဘောင်အလွန် မှာပါဝင်တဲ့ အချက်လက်များကို ကောက်နုတ်ပြီး တင်ပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အိမ်ရှေ့မင်းအုတ်ဂူနေရာမှာ အခုလက်ရှိ တွေ့နေရတဲ့ ကမ္ဗည်းကျောက်စာချပ် ဓာတ်ပုံကိုတော့ ကို Pyi Thar Yar ဆီကနေ ရတာပါ ။